Homeसमाचारश्रीमान् सुतिरहेका थिए, श्रीमतीले अनलाइन कपडा बेच्न’का लागि बनाइदिइन् मो’डल
January 31, 2021 admin समाचार 5228
सोसल मिडि’यामा एक श्रीमानका तस्बिर भाइरल भइरहेका छन् । ती व्यक्ति निदाइरहेका थिए । तर उनले महिलाको पहि’रन लगाइरहेका थिए । साँच्चै भन्ने हो भने ती पहिरन उनीमाथि बिछ्या’इएका थिए जुन उनले लगा’एको झैं देखिन्थ्यो ।
यस्तो क्रि’याकलाप ती व्यक्तिकी श्रीमतीको हो जसले फिलि’पिन्समा एक अनलाइन बुटिक चलाउँछिन् । उनले आफ्ना सुति’रहेका श्रीमानलाई मोडलको रुपमा प्रस्तु’त गरिदिइन् । यस्तो उनले अन’लाइन कपडा बेच्नका लागि गरिन् ।
यी तस्बिर Jo’s Online Shoppe नामको फे’सबुक पेजले सेयर गरेको हो । यसमा क्याप्स’नमा लेखिएको छ, ‘म्याने’क्विन छैन ? समस्या छैन । को’सिस चाहिन्छ ।
खबर लेख्ने बेला’सम्म यो पोस्टमा लगभग ६ हजारले कमेन्ट गरिसकेका छन् भने ११ हजारले रियाक्सन दिइसकेका छन् । यसका साथै यो पोस्टलाई २२ हजारले सेयर गरिस’केका छन् । धेरैजसोले महिलाको क्रिएटिभ आइडि’याको तारिफ गरिरहेका छन् ।
Jo’s Online Shoppe की मालिक जो’सेलिन मे ज्याजरेना क्याडेले जब आफ्ना श्रीमा’नलाई उत्तानो परेर सुतिरहेको देखिन् तब उनले श्रीमा’नलाई मोडलको रुपमा प्रस्तु’त गर्नेबारे सोचिन् । त्यसैले उनले सुतिरहेका श्रीमानको जिउ’मा स्कर्ट, टप, जिन्स र महिलाका विभिन्न परिहन राखि’दिएर फोटो खिचिन् । उनले श्रीमानको तस्बिर आफ्नो पसल’को फेसबुक पेजमा सेयर गरिन् तब यो मा’मिला भाइरल भयो । – रातो पाटी बाट
February 19, 2021 admin समाचार 4207
April 4, 2021 admin समाचार 4315
March 27, 2021 admin समाचार 4010
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227594)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215172)